Ogaden News Agency (ONA) – Wareysi Ilays TV iyo ONA la yeesheen Kooxda Danab ee Dalka Kenya
Wareysi Ilays TV iyo ONA la yeesheen Kooxda Danab ee Dalka Kenya
Posted by ONA Admin	/ June 4, 2012
Dhalinyarada Kooxda Danab ee dalka Kenya oo Warbaahinta siiyay Wareysiyo.
Danab oo aha koox ku caan baxaday fanka iyo Suugaanta Ogaadeeniya barnaamji badan ka samaysay fanka ayaa waraysi uu TV ga ilaysa la yeeshay waxay kaga warbixiyeen qaababka kala duwan ee ay u sameeyaan bandhig faneedyada ay Nairobi iyo magaalooyinka kale ka dhigaan .
Maxamed Cabdulaahi Yurub oo ah gudoomiyaha kooxda ayaa sheegay in kooxdu ay soo martay marxalado kala duwan ayna ku guuleysteen u jeedadii kooxda loo sameey isla markaana ay sii wadi doonaa hawlaha xaga fanka iyo suugaanta ee ay hayaan .
Mudane Maxamed Cabdulaahi ayaa intaas ku darey in ay soo wadaan barnaamjyo badan kuwaas oo buu yiri aan ku baahin doono dhamaan wadamada Aduunka iyo dalkii Hooyo ee Ogaadeeniya waxaan aad oogu faraxsanahay in aan maanta haysano Warbaahin aan ku baahino barnaamijta aan samayno ayuu u sheegay warbaainta Maxamed oo ah Gudoomiyaha Kooxda Danab. Dhalinyarada oo ka qayeb qaadaneysay barnaamij uu sameeyey Tv ga Ilays ayaa dhamaantood ay isku raaceen in ku faraxsanyihiin buuxinta kaalinta Fanka iyo Suugaanta.
Kooxdan dhalinyarada aha ayaa sameeyey Suugaan halgameed sida Dhaantooyin,Riwaayado,Heeso halgan iyo waliba majaajulooyin ay ku cabiraan dhibaatooyinka guumaysigu uu ku hayo shacabka Ogaadeeniya.
Warbixintan oo faahfaahsan TV-ga ilays kala socda.